Zayed University - WezeMfundo ePhakeme saka UAE
Zayed University Yokuxhumana
isifinyezo : UKUZE
Wasekelwa : 1998
Ungakhohlwa xoxa Zayed University
Bhalisa at Zayed University
Zayed University ungumholi besizwe amasha zemfundo. Yaqalwa ngo 1998 ngeqholo onegama uMsunguli the Nation - ngasekupheleni Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, kulesi sikhungo iwuhlelo uye wahlangana kulokho uMongameli eziphakeme. Namuhla, Zayed University ine esewonke ezimbili zanamuhla in Dubai futhi Abu Dhabi ukuthi ukwamukela kokubili abafundi zikazwelonke nezamazwe ngamazwe.
Zayed University kuyoba eyunivesithi ephambili United Arab Emirates futhi waqaphela emhlabeni wonke iqhaza layo ngo impumelelo sezemfundo nezamasiko kwandzisa ukuthuthuka komnotho kanye nomphakathi.
Zayed University kuyobalungiselela abaphothule afanelekayo ziyakwazi ukubamba iqhaza ekwakheni isizwe ngokusebenzisa enikeza specialisation kanye nezinhlelo zokutadisha okuhambisana namazinga amazwe omhlaba nokuthi ngokunikeza enhle yokufunda imvelo ukuze aqinise indima nyuvesi njengoba umholi ngentuthuko ucwaningo lwesayensi futhi umphakathi.
abafundi Umphakathi ngokubambisana Sikhungo lapho, ubuhlakani kanye nabasebenzi umsebenzi ndawonye ekuphishekeleni ucwaningo kanye nolwazi.
Attention lokuziphatha ngokunamathela ezindinganisweni eziphakeme zokuziphatha siqu, kugxiliswe ekuhlonipheni, ukwethembeka, inhloso, ukuziphendulela kanye nokwenzela izinto obala in practice and nesiyalo.
Innovation ngokusebenzisa ukwamukelwa kanye nokuthuthukiswa imikhuba eliphakeme kakhulu global ekufundiseni, yokufunda kanye nocwaningo.
Ukubambisana futhi ukubambisana ukuqinisekisa ukuzuzwa mission Zayed University futhi izinjongo zamasu ngempumelelo enkulu kanye nempumelelo.
Ubuholi esekelwe umsebenzi oncomekayo wokuphatha kanye nokukhulumisana okuqhubekayo phakathi kwabo bonke labo abanothando lokwenza lokho University kanye nokuvuleleka kwamanye amasiko, esebenzelana uyaqaphela nangendlela eyakhayo nabo, kokubili ngaphakathi nangaphandle umphakathi nyuvesi
Sungula cutting-edge imvelo zemfundo ikhuthaza lokusungula kanye emisha.
Lungiselela abaphothule afanelekayo bayakwazi enqubweni yentuthuko, abaphinde babophezeleke ithele sizwe, amandla amakhono asemqoka ukucabanga, futhi elivulekele izwe elibazungezile.
Ukukhulula okusezingeni bangayithola imfundo esezingeni eliphakeme ukuthi lugxile abafundi ekwandiseni’ ulwazi kanye namakhono.
Thuthukisa Izinga ucwaningo yeNyuvesi.
• Ukuqinisekisa ukuhlinzekwa kwezinsizakalo zonke imisebenzi yokuphatha ngendlela lehambisana nemtsetfo quality, ukusebenza kahle kanye obala nezinqubomgomo.
Asakaze isiko emisha ngaphakathi enhlanganweni
ubuchwepheshe & Ezemfundo
Psychology Nezinkonzo Zomphakathi
Ukwaziswa kwesimanje (Security & Network Tech)
Information Systems and Management Technology
Ukwaziswa kwesimanje (Enterprise Computing)
wazisa & Dev't Academic
Mathematics & Izibalo
Uyafuna xoxa Zayed University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Zayed University kumephu
Izibuyekezo Zayed University
Joyina ukuze kuxoxwe of Zayed University.
Amakolishi Higher of Technology Abu Dhabi